Wiil haysta dhalashada Mareykanka oo Soomaali ah oo Muqdisho isku qarxiyey – SBC
Wiil haysta dhalashada Mareykanka oo Soomaali ah oo Muqdisho isku qarxiyey
Posted by editor on October 30, 2011 Comments
Weerarkii shaley ka dhacay magaalada Muqdisho ee lagu qaaday fariisin ay leeyihiin ciidamada AMISOM & kuwa dawlada KMG ee ay fuliyeen xoogaga Shabaabka ayaa la sheegay in weeraradaasi oo isqarxin ay ka mid aheyd uu mid ka mid ah fuliyey wiil Soomaali ah oo haysta dhalashada Mareykanka.
Xarakada Al-Shabaab war ka soo baxay ayaa lagu sheegay in wiilkaasi magaciisa lagu soo loobay Cabdisalaam kaasi oo la sheegay in uu dalka Mareykanka ka yimid uuna mudo 2 sano ah ka qayb qaadanayey dagaalada Al-Shabaab kula jiraan ciidamada dawlada KMG iyo kuwa AMISOM.
Wareysi ay yeelatey Cabdisalaam idaacad ku hadasha afka Al-Shabaab ayuu ku sheegtey in uu uga soo tagey nolashii uu u haystey Mareykanak sida uu sheegay in uu Jihaad galo oo uu ILAAH naftiisa ka iibsado, waa sida hadalka uu u dhigay’e.
Wiiilkan oo uu ku adkaa ku hadlida afka Soomaaliga ayaa sheegay in isagoo yar oo 2 sano jir ah oo Mareykan ah wuxuuna sheegay in sanadkii 2009 isaga iyo dhalinyaro ay dalka Mareykanka ka ambabaxeen oo ay tageen Soomaaliya.
Cabdisalaam oo mar mar ku hadlayey luuqada Ingiriiska gaar ahaan lahjada Mareykanka ayaa baaq ayaa muujiyey sida uu ugu faraxsan yahay talabaada isqarxinta ah ee uu ku dhaqaaqay.
Ma jiro wax war ah oo ka soo baxay dawlada Mareykanka oo la xiriria wararka wiilkan Soomaaliga ah ee haysta dhalashada Mareykanka ee la sheegay in uu isku qarixiyey Muqdisho, laakiin horey dawlada Mareykanka waxay u sheegtey in ugu yaraan 20 dhalinyaro Soomaali ah oo haysta dhalashada Mareykanka ay ka ambabaxeen Mareykanka oo ay ku biireen dagaalada ka aloosan magaalada Muqdisho.
Dhinaca kale qaraxaasi waxaa sidoo kale qayb ka ahaa wiil kale oo magaciisa lagu soo koobay Aadam kaasi oo isna ka soo jeeda gobolada Baay & Bakool.
Wiilkan oo mar mar ku hadlayey lahjada Mayga ee Soomaaliga ayna ku adkeyd lahjada caadiga ah ee Soomaaliga ayaa sheegay in uu mudo ka qayb qaadanayey dagaalada xarakada Shabaabka ee Muqdisho, wuxuuna xusey in uu ku faraxsan yahay in uu ka qayb qaato dagaalada Jihaadka sida uu sheegay.